Hevitra MPANOHARIANA | Janoary 2010 | 2
2010-01-05 @ 23:12 in Andavanandro
Tontosa iny ny fetin'ny faran'ny taona fanaon'ny daholobe fa ny asaramanitry ny mpitondra fanjakana sy ny fikambanana kosa mbola ao anatiny tsara mandritra ity volana janoary ity. Ny teto Antananarivo manokana dia niavaka tokoa izany fety izany. Tsy niavaka ho reharehan'ny renivohitr'i Madagasikara fa ho henatra ho azy kosa.
Tsorina fa tsy Asaramanitra no niainana fa Asaramaimbo ara-bakinteny. Tsy nahate-hivoaka velively ny faran'ny taona fa mampihidy an-trano. Mpandalo ny afovoan-tananan'Antananarivo ny tena matoa mahasahy miteny izany. Mantsina tanteraka ny lalana andehananao miainga hatreny ambanin'ny zaridainan'Antaninarenina, Ambatomena, Tsaralalàna, Analakely (efa tsy ilay anoloan'ny lazaina ho metro intsony no ambarako eto fa Analakely amin'ny ankapobeny), Soarano... asa tsy fantatro intsony hoe hatraiza fa ireo ny afovoan-tanàna lazaiko aloha. Ny tena maharikoriko dia ny toerana somary mihataka ampolony metatra ny toeram-pidiovana no tena mantsina sy ifendrahan'ny loton'olombelona. Tsy ilay hoe tsy miditra any izahay fa eto ambaravarana ihany ity dia alefanay (miala tsiny indrindra raha mikaly ianao mamaky ny teny) fa hoe tsy todinay iny folo metatra iny fa mavesatra loatra ny rano entinay moa izahay rahateo kamo.
Raha tarafina dia avandravandrany fa tsy manana toeram-pidiovana izy any amin'ny tanàna misy azy any ka ampitoviana amin'ny any amin'ny niavian'ny tena ihany ny hanaovana an'Antananarivo afovoan-tanàna tokony ho fitaratra tsara ho an'ny Malagasy eo imason'ny vahiny. Tsy hoe fihatsarambelatsihy izany fa na aiza na aiza tokony hisy hatrany ny toerana tokony ho reharehan'ny mponina ka mendrika izany indrindra ny afovoan-tanàna izay aetrin'ireto tsy tamàna an-tranony ka mampiely ny malotony manerana ny tanàna ireto. Mba azonao vinaniana ve izany hoe anoloana sy anilan'ny Honey, Blanche Neige, Gastro Pizza no tena anaovan'ireto tsy mifaditrovana ireto ny hadalany? Tsy ho afa-miteny velively anefa ny tompon'ireo toeram-pisakafoanana sy fankafizana karazan-tsakafo izany raha tsy te-hahazo ny angaredon'ny "vahoaka madinika". Dia hoy ianao hoe aiza izany no hitsangatsangana? Aleo ny manana fiarakodia handehanana no hamaly fa tsy mahita valinteny loatra ankoatra ny toeram-pivavahana na an-tokatrano izahay sarangan'ny antonony ihany.
Fa eto ampanoratana aho dia mahatsiahy ny vanim-potoanan'ny talohan'ny fanjanahantany izay novakiako tamin'ny boky tantara fahakely. Tamin'ny faramparan'ny taonjato faha-19 tokoa anie dia tena Antananarivo iray manontolo mihitsy no mantsina satria eny amin'izay mahaporitra ihany no hanalana ny mavesatra. Efa nanomboka nisaritaka manko ny fanjakana tamn'izany fotoana izany ary efa nanomboka tsy voafehy intsony ny olona tamin'ny ankapobeny. Tsoriko fa raha namaky izany soratra izany aho tamin'ny voalohany dia kiriko sy tezitra satria nihevitra aho fa fanaratsiana ny Malagasy ihany ity nosoratana Malagasy ity saingy niaiky ihany aho fa tena nisy izay tranga izay rehefa mijery ny ankehitriny aho. Izany hoe nihemotra 120 taona be izao ny Malagasy eto Antananarivo raha ny fahadiovana sy ny fikajiana toerana no heverina. Ny tena mampiaiky ahy moa dia ny fefy manamorona ny Lapan'ny tanàna an-dalam-panamboarana aza ve dia anaovana maloto toy izany? Tena maharikoriko. Soa aloha fa efa nitsahatsahatra kely izany ezaka fandotoana sy fanamaimboana an'Antananarivo izany saingy tsy midika izany hoe nifarana hatreo ny amin'izany.
Ny Genesisy (Jenezy) nahatonga ny loto sy ny fofona ary ny korontana ankehitriny
Tamin'ny andron-dRazanamasy Guy Willy no nandrenesako sy nahitako voalohany indrindra izany fandaminana ny tanànan'Antananarivo izany. Raha miresaka tanànan'Antananarivo anefa tamin'izany fotoana izany dia Analakely ihany no tena fantatry ny Besinimaro. Analakely izay nikorontana tanteraka isan-joma indrindra indrindra satria lasa toeram-pivarotana avokoa hatreny andohan'Analakely mandra-pahatonga ety amin'ny Garan'ny Soarano. Lazan'ny tanàna tamin'izany fotoana izany ny tsena saingy efa nahatsapa ny maro fa tsy lasa intsony ity savoritaka afovoan-tanàna ity. Samy nanana ny fampielezan-keviny ny antoko saingy izy aloha no nolanian'ny Besinimaro ka nanapahany hevitra fa foanana hatreo ny tsenan'Analakely. Nafindra tamin'ny toeran-kafa manodidina avokoa mpivarotra rehetra tamin'izany fotoana izany, ary nifanarahana tamin'ny Japoney fa tsy haverina eny intsony ny tsena. Ny volan'ny Japoney manko no nampiasaina hanatsarana ity toerana an'Antananarivo ity. Finaritra ery ny tena nijery ny hakanton'ny tanàna ka nanao hoe hay ve azo atao tahaka izao ity tanàna ity? Dia nokarakarain'ny Le Buffet du Jardin ihany koa ny zaridainan'Antaninarenina rehefa vitany ny fifanarahana tamin'ny Kaominina tamin'izany fotoana izany. Dia nireharehana mihitsy fa efa mitovy amin'ny zaridainan'ny Andafy amin'izay ity zaridaina ratsy endrika talohaloha ity.
Nifanindran-dalana tamin'izany ihany koa ny firoboroboan'ny orinasa afaka haba ka maro tamin'ireo mpivarotra no nihevitra fa ny any no hahazoam-bola kokoa. Vokany, nihavitsy sy nihafoana tsikelikely ny mpivarotra amoron-dalana ka nanamora ny asam-panamboarana ny tanàna izany. Tonga ny Ben'ny tanàna manaraka, nitohy hatrany ny fanadiovana sy ny fanatsarana na teo aza ny fifanandrinana mangina teo amin'ny fitondrana foibe sy ny mpitantana ny tanàna. Nisy ny hetsika teto amin'ny firenena saingy hita fa efa tafiditra tao anatin'ny mpitolona tsara izany fikajiana ny tanàna izany. Nahazo horakora-panoherana izany mbola mahasahisahy mivalandrano amin'ny rindrina izany ary ny ankizy mihitsy ny hanaraby anao. Mahatsiaro menatra ny olon-dehibe zatra ny lalan-dririnina amin'ny fanaony nandritra ny gaboraraka fahatanorany. Tamin'ny 2001 izany dia nanjaka kokoa teto Antananarivo ny mpikajy ny fahadiovana sy ny filaminana.
Nasiaka dia nasiaka tamin'ny fitandroana ny fahadiovana ny mpitantana ny tanàna nanomboka hatreo ka nanjary nifanenjika matetika ny mpivarotra amoron-dalana izay tsy nahazo avara-patana mihitsy nandritra ny fitondran'ny filoha teo aloha sy ny mpiasan'ny Kaominina isan'nadro fa ny hariva kosa dia misy ihany ny fiverenan'ny mpivarotra mameno ny amoron-dalana. Tena voatandro tokoa manko nandritra izany fotoana izany ny hoe an'ny mpandeha an-tongotra ny amoron-dalana fa tsy an'ny mpivarotra. Niova tokoa ny endriky ny tanàna fandalovako satria feno zaridaina izay nandalovana (izay indrisy potika avokoa amin'izao fotoana izao). Nisy ihany anefa ny sarangan'olona tsy faly ka nihevitra fa nanjaka ny jadona (satria tsy afa-nanao izay tiany natao ny olona!). Nivoaka izany fahatezerana izany nandritra ny fifidianana Ben'ny tanàna tamin'ny desambra 2007. Na dia nilefitra nandritra ny fampielezan-kevitra aza ny mpitantana notendrena vonjimaika tamin'ny toerany, namela ny mpivarotra amoron-dalana hibodo indray ny amoron-dalana indrindra fa nanaraka iny Isotry izay fandehanako niasa tamin'izany fotoana izany iny, tsy nampiova ny safidin'ny mpifidy izay efa nahazo fampanantenana hahazo mivarotra malalaka ireny toerana ireny "noho ny fahasahiranam-bahoaka" raha voafidy izay nampanantena. Resy tanteraka ny antokon'ny mpitondra, niova tsikelikely ihany koa ny toerana nahafinaritra rehetra vao haingana teo.
Teo aloha manko, tsy nisy nahasahy nanitsaka na dia ny bozaka amin'ny zaridaina aza, ankoatra ny fotoana vetivety hakana sary angaha, hany ka maitso mahafinaritra hatrany ny zaridaina nanerana ny tanàna. nanomboka teo kosa dia tsy nisy intsony ny nampitandrina tsy hanitsaka ny bozaka na ny zaridaina. Ny hita aza dia noezahin'ny mpitantana ny tanàna vaovao ny hanimbana ny zaridaina rehetra tamin'ny alalan'ny famaritana azy ireny hananganana tranoheva indrindra nandritra ny desambra 2008, tamin'ny nanesorana sy nitrongisana ny zaridaina nisolo toerana ny Lapan'ny tanànan'Antananarivo efa may tamin'ny 1972 fa hoe haorina indray ny Lapan'ny tanàna. Napetraka tsikelikely tamin'ny mponina fa tsy misy dikany ireny zaridaina ireny fa ravoravo natentina tsy mahavaha olana akory ny "fahasahiranan'ny mponina". Voavoly tao an-tsain'ny mponina tamin'ny ankapobeny nanomboka hatreo fa mahazo manao izay tiany atao amin'izay izy...
Tonga ny tolona laoranjy 2009. Notokanana ny kianjan'ny demokrasia hamoriana olona. Tiana haseho fa maro mpanaraka ny mpitolona. Niezaka ny nanangona ny azy ihany koa ny filoha tamin'izany fotoana izany tamin'ny alalan'ilay sarim-pitsenana tamin'ny 25 janoary 2009. Tsy nahazaka ny nahita ireto olona notaterina tany amin'ny manodidina an'Antananarivo ny mpomba ny TGV ka ho famaliana bontana izany dia nopotehina ilay tetezana fiampitan'ny olona tetsy amin'ny CENAM 67ha vita nahafinaritra sy naha-te-hijorojoro aza. Io no fanimbana fananana iombonana voalohany natao ankarihary... Ary dia nitohy izany ny alatsinainy 26 janoary 2009 izay tsy dia tiako hotantaraina aloha. Tafapetraka tanteraka indray ny toe-tsaina tsy miraharaha ny endrik'Antananarivo izay nilaozana 15 taona nialoha io fotoana io. Noho ny fifanarahana dia lasa mpiambina ny kianjan'ny 13 mey ireo tsy nanao na inona na inona fa mpanaraka sy mpangatangataka amin'ny vazaha sy manao rami mandritra ny andro (izay no mahakatry rami azy ireny)... efa manana ny anarana ahafantaran'ny maro azy aza izy ireny fa tsy averiko eto izany. Koa rehefa mpiambina ny kianjan'ny 13 izy ireny, indrindra rehefa nitolona ny mpomba an-dRavalomanana dia matoritory sy milalao eny amin'ny zaridaina izay norarana tsy itsahina taona vitsivitsy nialoha io fotoana io. Dia manao izay tiany atao eny... Ka nifanaraka taminyianao koa! dia tonga amin'izao fenitra izao isika. Mitantara aho fa azonao tsikeraina izay nosoratako. Izaho koa mahafantatra tsara hoe iza no tena rangory nahatonga indray izao gaboraraka manimba ny tanànako izao.
Sarontava ny famitana Lapan'ny tanàna
Tadiavina ho atao rehareha amin'izao fotoana izao ny fanamboarana sy ny fahavitan'ny Lapan'ny tanànan'Antananarivo. Nahoana kosa moa no tsy lazaina hoe tsara izany zavatra vita izany saingy tamin'ny fomba manao ahoana moa?
Voalohany, nandritra ny fampielezan-kevitra desambra 2007 dia tsy naheno mihitsy aho hoe hamboarina ny Lapan'ny tanàna satria mety horaisin'ny olona ho fampanantenana poak'aty avy hatrany izany. Vantany vao lany izy no nanambara izany fampanantenana izany. Nanokatra ny kaonty fandrotsaham-bola izy hirodorodoan'izay mety ho malala-tanana. naverina nofefena indray ny manodidina ny Lapan'ny tanàna. Tsapako avy hatrany tamin'izany fotoana izany fa tsy ny hanaboatra ny Lapa loatra no tena nahamaika fa misy zavatra hafahafa ketrehina eo. Ny nampihomehy irery ahy dia toa nisinda ilay ahiahiko rehefa naroso 20 metatra ny fefy nanaronana ny toerana. maika nanarona fotsiny ry zareo sy nitrongy tanteraka ny zaridaina tao fa toa mbola tsy vonona akory ny vola. Hay tokoa moa ka efa tetika vita paika tokoa ilay hoe hanangana ny Lapan'ny tanàna fa... efa fantatsika ny tohiny no tena nokendrena.
Rehefa tontosa izay nokendrena ka vita ny fanonganam-panjakana vao notadiavina indray ny hamitana ny Lapa. Ilay vola nangonina tsy hita nanjavonana fa dia nilaza handrotsaka vola 1 miliara ariary hamitana azy ny CUA raha 5 miliara ariary kosa ny avy amin'ny fitondrana foibe. Raha ny tokony ho izy anefa dia tsy tokony hahazo hanokana vola ho amin'ny famitana ny Lapan'ny tanàna izany ny mpitondra foibe satria tsy voasoratra tao anatin'ny tetibola izany. Ny Rovan'ny Manjakamiadana aza tsy azo nanaovan'ny fitondra foibe toy izany fa tsy maintsy avy amin'ny vola nomen'ny tsara sitrapo rehetra sy ny malala-tanana no namitana ny andiany voalohany izay vita amin'izao fotoana izao fa tsy misy tokotaniny kosa ny andiany faharoa. Hitantsika moa fa manao izay tiany atao ny mifehy ny tanàna amin'izao fotoana izao, ka izay no nahafahana mamita io Lapa io, fa raha tsy izany dia nivandravandra fa ilay tontosa tamin'ny janoary hatramin'ny marsa 2009 ihany no tena nilàny io toerana io. Na izany na tsy izany, tsy tahaka izay tena tamin'ny endriny voalohany io fanamboarana natao io fa kely kokoa sy manify kokoa ny aty ambadika. Izany hoe tsy misy miraharaha ny amin'izany fa ny endriky ny Rovan'i Manjakamiadana ihany no tena tadidin'ny rehetra tsara ka tsy maintsy tafaverina amin'ny endriny teo aloha ny endrika hitan'ny Besinimaro imaso. Na izany na tsy izany tsy misy tsara tahaka ny vita e!
Tena zavatra hafa mihitsy no nokendreko hosoratana [ny resaka tolon'ny ankolafy telo sy ny hetsiky ny mpitondra fivavahana] fa dia lasa fanazavana hafa mihitsy no voavelabelatra. Raha te-hametraka hevitra ianao dia omany anaty brouillon aloha [notepad na Bloc-Notes] izay soratanao, dia rehefa vita izany no actualiser-nao ity takelaka ity, dia apetakao eo amin'ny hevitra ilay voasoratrao dia fenoina ny anarana, averina soratana eo anila ny marika hitanao dia alefaso amin'izay ny lahatsoratra.
jentilisa , 6 janoary 2010 amin'ny 01:16
2010-01-01 @ 22:15 in Andavanandro
Endrey! Nahatratra ny taona vaovao, hono, isika rey olona a! taona vaovao hifampirariana soa eo amin'ny fianakaviana sy ny havana aman-tsakaiza ary ny mpiara-belona rehetra. Fomba fanao ve ka dia arahina? Mba andro manokana kosa e! Impiry hifampirary soa amin'ny hafa kosa ary moa? Dia inona ilay soa ifampirariana ary? Samy manana ny tiany io. Ny tena miverimberina moa amin'ny fotoana tahaka itony dia ny prospérité, santé, bonheur (fanahy iniako ny manao azy ho teny frantsay satria teny hainareo tsara izany ary azoko matetika rahateo)... Sahiran-kevitra mandrakariva aho rehefa mahazo hafatra toy ireo, nefa tsy efa tsara kosa ve ireo firariantsoa ireo? Ka samy manana izay tiany mihitsy io.
Sahirana aho, amin'ny maha-Malagasy ahy amin'izao fotoana izao, raha prospère satria hoy ihany ny teny malagasy hoe ny hazo avo halan-drivotra, dia velona ny fialonana miainga amin'ny hoe matoa manankohariana dia noho ny halatra sy ny fitsetsefana mbamin'ny fanambakana ary ny kolikoly izay nataony... Tsy mahagaga raha maro ny Malagasy any ambany ravinahitra any na dia manambola betsaka aza no tsy misehoseho loatra amin'izany, fandrao voatondro ho mpirehareha amin'izany toerana izany ihany koa. Amin'izao fotoana izao aza moa ny kely ananana mbola lazain-dry zalahy hoe aleo indray mba ho anay fa efa ela itony no anareo!
Sahirana aho, raha ilazana hoe santé satria toa manambara ahy ho tsy salama lalandava izany ka toy ny hoe farofy, nefa ny fahasalamana no voalohan-karena; ary efa tsy andrianina intsony ny marary fa ny aza tratrany ihany (aleo farafaharatsiny tendany? koa raha kenda amin'izany?). Ny fiarahabana Andriana teto Imerina no hoe Tsarava... Tsy haiko intsony na niainga avy amin'ny teny hoe "Tsara va?", nefa mety ho firariana sahady mba ho tsara avy hatrany fa hosahirankevitra eo raha mandre hoe tsy dia salama... lanjalanjaina lalandava eny tokoa ve fa tsy mba mandeha tongotra loatra tsy ho farofy ihany e? Sa tsy mahazo manoratra tahaka izany moa aho?
Sahirana aho rehefa irariana ny bonheur satria toa petrakevitra tsy mety ho takatra (fa vano indray sa tararaka? tsy maninona ataovy vorompotsy hiara-dia, na vorondreo tsy mifanary, fa raha voromanga dia mahalala havana!), toa mametraka ahy avy hatrany ho dans le malheur... Tsy fahatsapana velively anefa izany bonheur izany ka entina ifaliana fa mitombina tsara ny hoe mijaly aho nefa sambatra. Aza tadiavina ela loatra ny hevitr'izany sao mahalasa adala anao eo... Fa torolalana kely ho anao fotsiny ilay filazana hoe: "Sambatra ny noana sy mangetaheta ny fahamarinana fa izy no hovokisana". Noana sy mangetaheta va ka ho sambatra? Minoa fotsiny ihany! Koa nahoana aho no mbola irariana bonheur nefa efa ao anatin'ilay bonheur? Dans le sens que ce bonheur me dirige vers le bonheur! Azafady! Salama tsara aho ka! mety mbola tsy ho takatrao fotsiny ny heviny!
Dia aza atao mahagaga anao nandefasako firariantsoa raha soratra manao hoe: "Ho aminareo (mandrakariva) anie ny fahasoavan'ny Tompo!" no vakianao. Satria samy manana ny Tompony io. Ao ny manana azy ho YHWH, na Jesoa, na Allah, na Bouddah, na Krishna, na Mammon... eny mety ho Moi na izaho ihany koa, tsy adino Ra-jeanne... tsia Razana no tokony ho fanoratra azy. Koa raha manonona anao hoe Tompo aho tsy ny Tompoko tsy akory no irariako hanasoa anao fa ny Tomponao ihany, mety ho miresaka tompo roa samihafa isika nefa mety miresaka tompo iray ihany koa. Fa tsy ny taona vaovao mihitsy kosa aloha no hitondra soa sy fanambinana ho anao na izany aza! Manahirana mihitsy ange ry zalahy ity teny malagasy ity nefa dia izany no malaza amin'ny olona... Toa tsianjery maimbo fotsiny.
Dia izay no ela fa dia inona loatra no nahatonga ny lohateny? Mijery ny zavamisy eto Madagasikara amin'izao fotoana izao manko ny tena ka dia mahatsiaro ilay hiran'i Mahaleo mitondra ny lohateny hoe Bemolanga iny. Toa hira taombaovao izy iny raha jerena amin'ny tonony. Dia indro averina kely ho antsika rehetra ny sombiny:
Ny taona ity miherina,
Asa izay mba entin'iny
Ahiako mbola hiverina
toy ny tamin'ny taona lasa ny zavatra raiketin'iny
Fa ny fanantenana
Efa mihena, mitsilopy
Fa tsy misy fihatsarana
Na mba hisy fiovana f'efa zary nofinofy
Mahavariana fa be tokoa ny mieritreritra ankehitriny fa ahiana ho toy ny tamin'ny taona 2009 lasa ihany no haverina horaiketin'ity taona vaovao 2010 ity. Na dia mitantara ny trangam-piainana tanatin'ny revolisiona sosialista tsy azo niresahana politika na nitsikerana fitondrana aza izany fotoana izany, itony hira Bemolanga fampanantenana natao tamin'ny olona itony no hiram-panoherana nasehon'ny olona ny tsy fahafaliany ka nohirain'ny tanora isan-tamboho. Mandraka ankehitriny, toy ny hiram-paminaniana indray fa toa hitohy amin'ny 2010 ny tolona natomboka tamin'ny 2009. Ankehitriny, rehefa hotrandrahina tokoa i Bemolanga hay ny orinasa vahiny ihany no hitavana azy fa tsy manambola hitrandrahana ny hareny i Madagasikara. Tahaka ny hoe naniry loza ho an'i Madagasikara ihany isika hitrandraka an'i Tsimiroro sy i Bemolanga fa ny angovo dia imatimatesan'ny firenena ambonin'ny tany, ary izay firenena trandrahin'ny vahiny ny angovo ao aminy toa miady an-trano avokoa... Ka ampiadiany izay manaiky miady tsy hanelingelina ny fitrandrahany azy, fa sombintsombiny ihany ny vola omeny ny mpitondra ho fanapena-maso ity farany. Koa tsy an-dalan'ny ho any koa ve izany isika? Indrisy manko...
Manahy aho fa tsy hisy hiova
Ny omaly tsy hiova volo (Aiza kosa? tsy maintsy hoe ihany orange ve?)
Tsisy nanombinana fa efa may avokoa (na efa zary bobongolo)
jentilisa, 02 janoary 2010, amin'ny 00:20 maraina